Lutris maneja wemutambo uyo wega wega Gamer anofanira kunge aine | Linux Vakapindwa muropa
Lutris iri yemahara uye yakavhurwa sosi yemutambo maneja yeLinux, maneja uyu ine rutsigiro rwakananga rweSteam uyezve kune vanopfuura makumi maviri emulator yemitambo pakati payo yatinogona kuisa DOSbox, ScummVM, Atari 800, Snes9x, Dolphin, PCSX2 uye PPSSPP.
Iyi software huru inotibvumidza kuunganidza zviuru zvemitambo mune imwechete application yemapuratifomu akasiyana, atinogona kutaura nawo kuti ndiyo Kodi yemitambo. Naizvozvo, iri sarudzo yakanakisa kune yega gamer.
1 Lutris Hunhu
3 / Maitiro ekuisa mutambo muLutris?
Sezvatakambotaura, uyu ndiye maneja wemutambo, uyo inotibvumidza kumisikidza uye kumhanyisa zita rega rega kuburikidza neanosimudza, iyo yatinogona kuwana zvakananga kubva pawebhusaiti yavo.
Vanoisa izvi vanopihwa nenharaunda yavo huru kufambisa kuiswa kwemimwe mitambo iyo inofanirwa kuitiswa pasi peWine.
Uyezve, Lutris ine rutsigiro rweStam Saka mazita atinawo muaccount edu anogona kuwiriraniswa naLutris uyezve kumhanyisa iwo anozvarwa kuLinux kana zvikasadaro tinogona zvakare kumhanyisa Steam pasi peWine uye iyo yekumisikidza ichatarisira zvese.
Ivo vanoisa vanogona kuwanikwa kubva kune yavo yepamutemo webhusaiti, the chinongedzo ndeichi. Pano tinogona kuona nhamba huru yemitambo yainotsigira, pamwe neiya inochengetwa nenharaunda nekupa zvipo.
Lutris anobata-imwechete yekumisikidza kumisikidza saka isu tinongoenda chete kuzita ratiri kuda uye tinokwanisa kuona kuti sarudzo yekumisikidza inoonekwa.
Nenzira iyi Lutris anozvimhanyisa otarisira kurodha pasi izvo zvinodiwa.
Uyewo isu tine sarudzo yekunyoresa uye kuburikidza neakaundi iyo yatinowana pamwe nekunyora tinogona kugadzira raibhurari yedu yemitambo, ayo anoenderana neyedu desktop desktop. Isu tinongofanirwa kuiswa mukati mayo.
Isu zvakare tine sarudzo yemitambo yakatengwa kuburikidza neGOG uye Humble Bundle inogona kuwedzerwa nemaoko.
Kuti tive neiyi software huru mune yedu system, isu tinofanirwa kuita zvinotevera, ngativhurei chinouraya ctrl + alt + T uye zvinoenderana nesisitimu yatinayo tichaita zvinotevera:
Pakupedzisira tinoisa ne:
Kune Fedora tichaenda kushandisa openSUSE repos, zvinoenderana neshanduro yeFedora isu tinofanirwa kuwedzera inoenderana:
Kana iwe uine ArchLinux kana imwe yakabva pairi, isu tichakwanisa kuisa Lutris kubva kuAUR repositori nerubatsiro rweYaourt
/ Maitiro ekuisa mutambo muLutris?
Kamwe Lutris paakaiswa pane yedu system, isu tichaenderera nekumhanyisa kunyorera.
Atova mukati make tichaenda kumenu «Lutris> Manage vamhanyi»
Iko kunoratidzwa vese emulators anotsigirwa naLutris, mune yangu kesi ndichaisa mutambo wandinayo muStam account yangu.
Kune izvi ini ndiri kuzotsvaga Steam mune rondedzero, mune ino kesi ini ndiri kuzoshandisa Resident Evil 6, nekuti izvi zvinodikanwa kuti Steam inomhanya pasi peWine.
Iye zvino Isu tinongofanirwa kumisikidza sarudzo dzatinopihwa neMumhanyi, senge vhezheni yeWine iyo ichamhanya, ndeipi resolution, kana iri yakazara skrini kana mune windows windows, kana ichizowana rutsigiro rwe XBOX zvinodzora, mune iyo folda iyo ichaiswa uye nevamwe.
Sezvo munhu wese aine akasiyana ehunhu hwehunhu, kumisikidzwa kwakasiyana, saka ini handibatanidzwe muchikamu chino.
Waita izvi isu tinoenderera kuenda kune yepamutemo webhusaiti ye lutris uye isu tinotarisa zita remutambo watinozoisa. Mune ino kesi Resident Evil 6 uye isu tiri kuzomhanyisa inoisa.
Naizvozvi, lutris anozochengeta zvese, kurodha pasi Steam, kumisikidza maraibhurari anoenderana nezvimwe.
Pakupera kwemaitiro isu tinokwanisa kuzadzikisa zita redu pasina kumwe kuomarara.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » Lutris maneja wemutambo uyo mutambi wese anofanirwa kuve nawo
Zvinonzwika zvinotyisa, ngativei netariro kuti zvinoshanda zviri nyore sezvaunotaura nekuti ini ndiri muhombe. Kutevedzera mitambo yeWindows, ini ndaingoedza naWine + Playonlinux uye chokwadi ndechekuti pese pandinoedza, ndinofanira kudzoreredza Linux kugadzirisa dambudziko rakagadzirwa. Parizvino pane hafu yemakumi gumi nemaviri emitambo inoita kuti zvive zvakakosha kwandiri kuti ndichengetedze Windows uye kubva pane zvandinoona pane peji reLutris vanotsigirwa (Oblivion, Skyrim, ...), handisi kuti ndinomhanya kuti ndiedze , nekuti iyo yekupedzisira fiasco ine Waini ichangobva kuitika uye zvakadaro ndine hurombo zvishoma kuisa panjodzi kumisikidza asi ndisati ndavandudza vhezheni, ini ndoda kuita yakachena mashandiro, ndichaipa mukana wekuona kana ndikabudirira. Kana zvikafamba mushe, ini ndaizowana yakawanda yemahara nzvimbo pane yangu ssd nekubvisa Windows, ikozvino ndave izere.
Mangwanani akanaka Gregorio, mune yangu zvaive zvinoshamisa nekuti ini ndichangotanga kubata mamwe mazita andinayo mumuviri fomu neSteam, ndichishandisa mukana wezvipo nezvipo, unoziva ...
Ini pachangu, ndinofarira kushandisa Crossover, asi pandakasangana na lutris ndakayedza, ndakangobatanidza yangu Steam folda paWindows naLutris uye chirongwa chakatarisira zvinoenderana zvinoenderana uye marongero.
Ini handisi kuti inoita zvese nemashiripiti, isu tinofanirwa zvakare kuziva nezveedu Hardware uye ndeapi masisitimu ari akakodzera kwazvo pamutambo wega wega wevhidhiyo.
Nguva dzese iwe paunowedzera kuzviedza kwandiri. Pamazita ese andinayo, angangoita ese ari paStam, anomhanya Skyrim, Oblivion uye Farcry2, kunyanya Skyrim, ini handina basa nezve mamwe ese. Ini handizive kuti zvichave nyore sei kubata Lutris, iye chete mugadziri uyo anoisa Steam mitambo yandakakwanisa kundishandira ndiRultultis, inogumira kune hafu yemakumi gumi nemazita mazita ane mutengi wemuno, asi akakodzera kune asina kujeka seni. Mushure mekuverenga chinyorwa chenyu, ndanga ndichironga kupa Lutris mukana pandinogadziridza Linux Mint, kunyangwe tichaona kana ndikasatanga imwe yekudzokorora dhisiki paPC uye ndisvike kumberi kwangu.
Pakupedzisira ini handina kukwanisa kuramba muyedzo uye ndikayedza, zvinosuwisa kuti handina kukwanisa kuisa Oblivion kana Skyrim. Ini zvakare ndinotaura kuti iyo yekumisikidza mitsara iwe yawakaisa (ini ndakayedza iyo neUbuntu uye zvigadzirwa, ini ndine Linux Mint 18.3) inopa kukanganisa, ndinofunga iko typographical kukanganisa kana uchijoinha akati wandei maodha, nekuti ini ndakaiyedza iyo nemirairo iyo iri mune peji reLutris uye kana zvaishanda. Ndakaona kuti iwo akafanana odha asi mumitsara yakasiyana, ndosaka ndichifunga kuti pane mhosho pakuvaisa mune imwe chete. Chinhu chinoda kuziva icho chakaiswa pasina kundibvunza yangu Steam account dhata, ini handizive kana ichifanirwa kugadziridzwa zvakasiyana kana kwete, mune iyo chirongwa chandakataura pamusoro, Recultis, ini ndinogadzira iro zita rekushandisa uye password uye yatove ivo kune wese munhu wauinaye. Chokwadi ndechekuti akazvikanda masikati ese nehusiku zvakanamirwa muhwindo rekurodha pasi uye haana chaakaita, ndine fiber kumba uye kuisa chero chadzo pane Steam chinongonditorera maawa mashoma.
Zvisinei hazvo ini ndinowana iro zano rinonakidza kwazvo uye ini ndichave ndinoteerera kune mafambiro anoita Lutris mune ramangwana.
Jhonny Barreto akadaro
Ini ndiri mutsva kune yemahara software nharaunda uye ndinoida asi ini handina kukwanisa kuisa mitambo, ndine dambudziko, muchina wangu i386 uye sezviri pachena haienderane nemapuratifomu ane lutris, chii chandingaite gadzirisa mamiriro aya, ehe unogona kundibatsira?
Pindura Jhonny Barreto